जयकला घर्तीले अस्पतालमै गरिन् आत्महत्याः अस्पतालमा एक वर्षमा तेस्रो आत्महत्या — KhabarTweet
जयकला घर्तीले अस्पतालमै गरिन् आत्महत्याः अस्पतालमा एक वर्षमा तेस्रो आत्महत्या
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत्र २५, २०७३ समय: ७:५२:३०
काठमाडौ । राजधानीको नेसनल ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत एक विरामीले बिशीबार बिहानै आत्महत्या गरिन् ।
निकै ठूलो चोटपटक लागेका, दुर्घटनामा परेका र उपचारमा लामो समय लाग्नसक्ने विरामीको उपचार गर्नका लागि ट्रमा सेन्टर खोलिएको हो । यस्ता रोग लागेका बिरामी डिप्रेसनमा जान सक्ने भएकाले मनोचिकित्सकहरुको सर(सल्लाह चाहिने भएपनि केन्द्रमा अहिलेसम्म एकजना पनि मनोचिकित्सकको दरबन्दी छैन ।
बिहीबार पाँचौ तल्लामा आत्महत्या गरेकी ६० बर्षीया जयकला घर्ती तीन महिनादेखि ढाड दुखाइ र दुई महिनादेखि खुट्टा लुलो हुने समस्याले पीडित थिइन् । मेरुदण्डको क्षयरोगको आशंकामा गत चैत ७ गते उनी अस्पताल भर्ना भएकी हुन् ।
उनले झ्यालबाहिर अप्ठ्यारो ठाउँमा पासो लगाएको ट्रमा सेन्टरका सुपरिटेन्डेन्ट डा. प्रमोदकुमार उपाध्यायले बताए ।
आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ,
काठमाडौं – बिरामी तथा अन्य व्यक्तिले अस्पताललाई आत्महत्या गर्ने थलोका रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । एक वर्षमा काठमाडौंका अस्पतालभित्र तीनजनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । चिकित्सकका अनुसार यस्ता घटना काठमाडौंका अस्पतालमा एक वर्षअघिसम्म सुनिँदैन थिए । पारिवारिक झगडा, मानसिक तनाव, आर्थिक अभावजस्ता कारणले अस्पतालमा आत्महत्या गर्ने गरेका छन् ।
बिहीबार बिहान मात्रै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा एक वृद्धाले आत्महत्या गरेकी छिन् । ६५ वर्षकी जयकला घर्तीमगरले सेन्टरको पाँचौँ तलाको झ्यालमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी हुन् । पैसा तिर्न नसकेर बिरामीले आत्महत्या गर्ने घटना हुने गरेका भए पनि पछिल्लो समय आर्थिक अभाव र मानसिक तनावकै कारण बिरामीले आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको चिकत्सकहरू बताउँछन् ।
आर्थिक अभावले होइन स् निर्देशक
बाग्लुङ निसी–१ घर भएकी जयकला मेरुदण्डमा समस्याले हिँड्न नसकेपछि तीन हप्ताअघि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा भर्ना भएकी थिइन् । उनको मृत्युको कारणबारे अझै यकिन हुन सकेको छैन । घटनाले आफूहरू स्तब्ध भएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा। प्रमोद उपाध्यायले बताए । ‘बाहिर देख्दा आर्थिक अभावजस्तो देखिन्छ, तर उहाँहरूले आफू गरिब भएको अस्पताललाई भन्नुभएन,’ डा। उपाध्यायले भने, ‘औषधिहरू किनेर ल्याउँथे, अस्पतालको चार्ज असाध्यै न्यून थियो ।’ बेडमा एक रात बसेको दुई सय रुपैयाँ लाग्छ । ‘जयकलाको अप्रेसन गर्नुपर्ने रोग थिएन,’ डा। उपाध्यायले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उनको मेरुदण्डको पछाडिपट्टिको भागमा टिबी भएको थियो । स्वास्थ्य उपचार भइरहेको थियो । धेरै ठूलो खर्च लाग्ने अवस्था पनि थिएन । त्यसैले आर्थिक अभावका कारण आत्महत्या गरेको हो भन्ने विषयमा सत्यता छैन ।’ बिहीबार मात्रै उनका परिवारले पाँच हजारको औषधि किनेर ल्याएका थिए ।
उपत्यकाका अस्पतालमा भएका आत्महत्याका घटना
गत ३२ जेठमा सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजको चौथो तलाबाट हामफालेर एक पुरुषले आत्महत्या गरे । चाबहिलबाट मर्निङवाकमा निक्लिएका ५२ वर्षीय गोपीकृष्ण बस्ताकोटीले अस्पतालमा गएर आत्महत्या गरेका थिए । ‘अस्पतालसँग क्षतिपूर्ति नमाग्नू, अस्पताललाई दोष नदिनू, यो दोष मेरो हो,’ उनले आफ्नो सुसाइड नोटमा लेखेका थिए । बिरामी नभए पनि आत्महत्या गर्नकै लागि उनले अस्पताल रोजेका थिए ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा मिर्गौलाको उपचार गराइरहेका दोलखा मालु बस्ने १८ वर्षीय विजय खड्काले गत २१ भदौमा आत्महत्या गरे । अस्पतालको तीन तलामाथिको झ्यालबाट हामफाल्दा गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । उनले अस्पतालको बिरामी कक्षको तीन तलाबाट हामफालेका थिए ।
अस्पतालले वास्तै गरेन
दिलुजा घर्तीमगर, मृतक जयकलाकी छोरी
पुसदेखि आमाले पछाडिको भाग दुख्यो भन्दै हुनुहन्थ्यो । निको होला भनेर केही दिन वास्ता गरेनौँ । पछि रोग झन् बल्झिँदै गयो । त्यसपछि ५० जहार रुपैयाँ ऋण खोजेर बुर्तिबाङ बजारमा ल्यायौँ । त्यहाँ पनि उपचार नहुने देखियो । त्यसपछि पोखराको मनिपालमा ल्यायौँ । त्यहाँबाट फेरि फिस्टेलमा गयौँ । त्यहाँ पनि उपचार हुन सकेन । पोखरामा पाँच दिन राखेर गत ६ चैतमा काठमाडौंमा ल्यायौँ । पोखराको हस्पिटलले स्पाइनलकटमा टिबी भएको हुन सक्ने बताएको थियो ।
५० हजार रुपैयाँ पोखरामा सकिएको थियो । हामीसँग रोजगारीका लागि साउदीमा गएको भाइलाई फोन गर्नुको विकल्प थिएन । घरमा अरू कसैको आम्दानी छैन । भाइ साउदी गएको पनि भर्खर ५–६ महिना भएको छ । उसको त्यति धेरै कमाइ पनि छैन । त्यसैले भाइले साउदीमा साथीहरूसँग ऋण गरेर एक लाख रुपैयाँ पठाइदियो । १८ दिनसम्म हस्पिटलमा राख्दा त्यो रकम पनि सकियो ।
हामीलाई डाक्टरहरू आएर उपचार हुँदै छ भन्दै जानुहुन्थ्यो । हामीले पनि कुरिरहेका थियौँ । उहाँहरूले तपाईंहरूको अप्रेसन गर्नुपर्छ होला पनि भन्नुभएको थियो । तर, खासै वास्ता गरेजस्तो लागेन । गत शुक्रबार हाम्रो पालो हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । फेरि मंगलबार सारियो । त्यो दिन पनि केही काम हुन सकेन । त्यसपछि शुक्रबार हुन्छ तपाईंको उपचार भन्दै हुनुहुन्थ्यो । रिपोर्ट आएपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो । रगत र पछाडिको मासु झिकेर चेक गर्नुपर्छ पनि भन्नुहुन्थ्यो । तर, त्यो काम पनि गर्नुभएको थिएन । किन त्यस्तो गर्नुभएको होला कुन्नी ?
हिजो बेलुकी आमाले निकै दुख्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । मैले तेल लगाएर मालिस पनि गरिदिएकी थिएँ । उहाँ निको हुने होइन, पैसा मात्र खर्च भयो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । हामीले चिन्ता लिनुपर्दैन, निको हुन्छ भनेर आश्वासन दिएका थियौँ । केही हिँडडुल पनि गर्नुहुन्थ्यो । उहाँलाई सहयोग गर्न हस्पिटलमा म र मामा मात्र थियौँ ।
म आज बिहान ४ बजे नै उठेर हेर्दा उहाँलाई देखिनँ । ट्वाइलेटतिर हेर्न गएँ । त्यहाँ पनि भेट्टाउन सकिनँ । त्यसपछि मामालाई उठाएर खोज्न थाल्यौँ । यसो झ्यालतिर हेर्दा त उहाँ झुन्डिरहनुभएको थियो । झ्यालको फलाममा आफ्नै पटुकाको पासो लगाएर झुन्डिनुभएको रहेछ । हामीले त विश्वास नै गर्न सकेनौँ । आजको कान्तिपुरमा खबर छ ।